२०७७ असोज १४ बुधबार ००:५५:००
मृतक सम्झनाका हजुरबा गोरखबहादुर कामीले भने, ‘निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको घटनामा पनि दोषी उम्किए, सजाय पाएनन्, मेरी नातिनीको पनि त्यस्तै गुपचुप गर्दिन्छन् कि !’
बझाङ चैनपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार सर्वपक्षीय छलफल हुँदै थियो, जहाँ सम्झनाका हजुरबा गोरखबहादुर कामी पनि थिए । ‘हामी गरिब छौँ, तर मेरी नातिनीको हत्यारा समातिएर पनि उम्कने हुन् कि भन्ने डर छ, जसरी हुन्छ न्याय दिनुहोस्,’ उनी हात जोडेर गुहार माग्दै थिए । तर, यसो भन्दाभन्दै उनी भिडकै बीचमा भक्कानिए । आँसु पुछे र एकछिनपछि आंशकापूर्ण भावमा भने, ‘निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको घटनामा पनि दोषी उम्किए, सजाय पाएनन्, मेरी नातिनीको पनि त्यस्तै गुपचुप गर्दिन्छन् कि !’
सम्झनाका बुबा (३५) बिजुली कामी पहिले पनि कामका लागि भारत जान्थे । ठूलो परिवारको आर्थिक बोझ धान्न नसकेपछि उनी चार वर्षदेखि परिवारै लिएर भारतको बैंग्लोर बस्न थाले । ३२ वर्षे श्रीमती धौली कामी, छोरो र दुई छोरी उनीसँगै थिए । गाउँको घरमा ठूला तीन छोरी, बुबाआमा र बहिनी बस्छन् । ‘मेरी फूलजस्ती सम्झनालाई राक्षसले चुँडिदियो, ऊ मेरी सहारा थिई, घरको काम मात्रै होइन, मेलापातको काम पनि उसले आधा उकास्थी,’ गोरखबहादुर भन्छन् । उनी आफू बिरामी हुँदा पानी दिने नातिनी गुमाउनुको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनन् । ‘केही परिहाले नातिनी छँदै छ भनेर ढुक्क हुने दिन गए, राक्षसले हाम्रो खुसी चुँडिदियो,’ उनी भन्छन् ।
बोलाए मात्रै बोल्ने स्वभावकी थिइन् सम्झना । कक्षा–६ मा पढ्थिन् । उनको पढाइ पनि राम्रो थियो । बिजुलीले गरिबीका कारण ६ कक्षामाथि पढ्न पाएनन् । ‘छोरी घरमै हुँदा पढलेख गर्छे, आफूले गर्न पाइनँ भनेर यतै छाडेको थिएँ, तीनजना एउटै स्कुल पढ्थे,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अचानक यस्तो खबरले मरुँ कि मारुँ ? भयो ।’ अवोध छोरीको हत्या भएको थाहा पाएपछि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका बिजुली भोलिपल्टै गाउँ फर्किए । तर, आमा धौली गाउँ आउन पाइनन् ।
साहुले ऋण नतिरे गाउँ आउन नदिने भनेपछि छोरीको न्यायका लागि आफू घर आएको उनी बताउँछन् । ‘गाउँ त आएँ, तर आफ्नै छोरीको लाससमेत हेर्न पाएको छैन, क्वारेन्टाइनमा बसेको छु,’ उनले भने । घर फर्किंदा मात्रै ३० हजार रुपैयाँ सकिएको उनले बताए ।
नेपाल फर्किएपछि उनले जिल्लाका नेतादेखि सांसदसम्मलाई फोन गरेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘पहल गर्छु सबैले भनेका छन्, तर अहिलेसम्म दोषी को हो ? भनेर प्रहरीले किन भनिरहेको छैन,’ उनी भन्छन् । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपालमा फाँसीको सजाय छैन, उसका बाआमालाई त छोरा आउला भन्ने आस त हुने नै भयो, मेरी त छोरी सधैँलाई गई, यस्ता अपराधीलाई सरकारले कस्तो सजाय दिने हो ? तपाईंहरू नै भन्नुस् ।’ उनले छोरीलाई जसरी पनि न्याय दिनुपर्ने बताए । ‘मेरी छोरीलाई न्याय दिलाइदिनुप-यो, अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिदिनुस्, मलाई राहत चाहिएको छैन,’ उनले भने ।
सम्झनाको ‘हत्या’ले उनको परिवार मात्र होइन, खिकाला गाउँ नै शोकमा डुबेको छ । घटनाको वास्तविकता तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई दबाब दिन खिकालावासी सदरमुकाम चैनपुर पुगेका छन् ।
१२ वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न २० वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई प्रहरीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । बझाङ मष्टा गाउँपालिका–२, खिकालाकी १२ वर्षीय सम्झना कामीको ७ असोजको साँझ बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ८ असोजमा पक्राउ परेका बोहरालाई प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो । बालिकाका हजुरबा गोरखबहादुर कामीले त्यही दिन छिमेकी बोहराविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए।
मन्दिरनजिकै खोल्सीको छेउमा भेटिएका डोको र नाम्लो
घटना त्यतिकै सामसुम पार्ने सहमति भयो । ३१ साउनमा राजेन्द्रले बालिकालाई पाँच सय रुपैयाँ दिएर माफी मागे । सहमति थियो, ‘गर्भ बस्यो भने जिम्मा लिने, अन्यथा बाहिर सार्वजनिक नगर्ने ।’ तर, त्यसको ३८ दिन नबित्दै त्यही समयमा राजेन्द्रले अर्को बलात्कार र हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । गाउँमा पुग्न वडा कार्यालयबाट आधा घन्टा मात्रै लाग्छ । वडाध्यक्ष शेरबहादुर खड्का भने आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘यस्तो अपराध किन लुकाइयो ? भनेर सोधीखोजी गर्दै छु, वेलामा छानबिन गरेको भए अहिले यो घटना हुने थिएन,’ उनी भन्छन् ।
सम्झनाको शव भेटिएको स्थान : सिम देवताको मन्दिर
गाउँका बाहुल्य दलितहरूले मन्दिरमा बाहिरैबाट पूजाआजा गर्छन् । बोहराहरूको बस्ने ठाउँ छुट्टै छ । अझ मन्दिरको ‘गजुर’ भएको ठाउँमा त दलितहरू जानै मिल्दैन । दलितले मन्दिरमा बोहराहरूसँगै पूजाआजा गर्न पाउँदैनन्, त्यसो गरे अशुभ हुन्छ, छोइछिटो लाग्छ । तर, त्यही मन्दिरभित्र १२ वर्षीय अबोध बालिका सम्झना कामीको बलात्कार र हत्या भयो । बलात्कारीसँग संघर्ष गर्दा उनको शरीर छियाछिया भयो त्यही मन्दिरभित्र । मन्दिरमै बग्यो उनको रगत र त्यहीँ गयो उनको अन्तिम श्वास पनि ।
एउटै स्कुलमा पढ्ने छिमेकी राजेन्द्र बोहराले एक दिन सम्झनालाई कानका मुन्द्री मागे । तर, उनले दिइनन् । उनले धम्क्याए, नदिए कुट्ने, पिट्ने र मार्ने भनेका थिए । त्यसलगत्तै उनले हजुरबा गोरखबहादुरलाई भनेकी थिइन्, ‘मलाई डर लाग्न थालेको छ, त्यो राजेन्द्रले यसो भनिरहेको छ, म मुन्द्री फुकालेर राख्छु ।’ तर, गोरखबहादुरले फुकाल्न दिएनन् । उनी भन्छन्, ‘मैले फुकाल्नुपर्दैन, म त्यसलाई भेटेको वेला सम्झाउँछु भनेको थिएँ, म उनीहरूको घरमा पनि गएको हुँ, तर उसलाई भेटिनँ, सम्झाउन नपाउँदै मेरी नातिनीको ज्यानै लिइदियो ।’ राजेन्द्र धम्क्याएको करिब साता मात्रै बित्दै थियो ।
कुरा ७ असोजको हो । दिनभरि बाख्रा चराएर गलेकी सम्झना दिउँसो करिब ४ बजे गोठमा गोरुलाई घाँस काट्न हिँडेकी थिइन् । उनलाई हजुरआमाले नजाऊ पनि भनिन् । तर, उनी मानिनन् । हातमा एउटा खाली डोको, नाम्लो र हँसिया लिएर खोलापारिको गोठतिर उनी जाँदै गर्दा हजुरआमाले घरबाट देखिने पारीको घुम्तीसम्म पनि देखेकी थिइन् । घरबाट गोठमा पुग्न करिब आधा घन्टा लाग्छ । बीचमा बाटोबाट करिब एक सय मिटरको दूरीमा सिम देवताको मन्दिर छ । मन्दिरको वरिपरि सल्लाघारी छ, घरहरू छैनन् ।
सम्झनाको शवसँगै सिम देवताको मन्दिरमा भेटिएका हातहतियार
दलितलाई अझै धाक–धम्की
प्रधानाध्यापक अधिकारी भन्छन्, ‘गाउँमै विद्यालय छ, धेरैको पढ्नुपर्छ भन्ने सोच अझै पनि छैन, पूरै गाउँमा अहिले पनि एसएसली उत्तीर्ण गर्नेको संख्या १० कट्दैन होला ।’ गाउँबाट करिब आधा घन्टामा माध्यमिक तहको विद्यालयसमेत छ ।
‘बझाङमा दलितमाथि हुने अन्यायको कुनै सीमा र व्याख्या छैन,’ सांसद आशाकुमारी विक भन्छिन्, ‘दलितमाथि ठूलो अन्याय छ, तर न्याय पाउने अवस्था छैन, दलितलाई कानुनी ज्ञान छैन, उजुरी गर्ने पहुँच छैन । यस्ता धेरै घटनामा उजुरी नै पर्दैनन्, प्रहरीले पनि वास्ता गर्दैन ।’ अपराध गरेर प्रहरीले थाहा पाए पनि प्रहरी पुग्दा अपराधी फरार भइसकेका हुन्छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ११ वटा बलात्कार भए । ती अधिकांशमा दलित पीडित छन् । तर, पीडक भने उजुरी पर्नेबित्तिकै भारत छिर्छन् । गाउँ फर्किंदैनन् ।
जिल्ला प्रहरीका अनुसार ३ असार, ०७५ मा तलकोट गाउँपालिका–२, जनैनाकी १३ वर्षीय बोल्न, हिँड्न नसक्ने दलित बालिका बलात्कृत भइन् । बालिकाका बुबा गाउँका ठूलाबडालाई नसोधी किन उजुरी गर्नु भनेर सोधपुछमा लागे । तर, बलात्कारी फिटु कुँवर भोलिपल्टै फरार भए ।
पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिए पनि कुँवर पक्राउ परेनन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेर ज्यानै जाने अवस्था सिर्जना भएपछि ४४ वर्षीय कुँवर गाउँ फर्किए । उनलाई ११ भदौ, ०७७ मा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पीडित बालिकाका बुबा भन्छन्, ‘मेरी अपांग छोरीमाथि जबर्जस्ती ग¥यो, अहिले पक्राउ गरिएको छरे, मेरो कोही छैन, मैले पैसा पनि खर्च सक्दिनँ, सरकार छ भने मलाई न्याय देऊ ।’ पक्राउ परेको कुँवरलाई प्रहरीले अदालतमा बुझाएको छ ।
#सम्झना # बलात्कार
सप्तरीमा शाैच गर्न भएकी किशोरी बलात्कृत, अर्की एकमाथि बलात्कारकाे प्रयास
दुई महिनामा प्रदेश–२ मा बलात्कारका ८७ घटना
बलात्कार आरोप लागेका तीन आरोपी एक वर्षपछि पक्राउ